News - Dị ọcha eke ihe
Ọ dịghị onye kpara akwa
Ihe okike di ocha
1. linen ákwà
Linens, enweghị isi na-ekwu, bụ ọsọ-n'oge okpomọkụ uwe. Ọ na-ekwe ka anụ ahụ na-eku ume, mana ọ na-enye ume ọkụ anaghị enye gị ọsụsọ ọkụ, enweghị nsogbu ọkụ eletrik, dịkwa nro na-emetụ aka, ndị na-arịa nfụkasị bụ enyi na enyi. Ọzọkwa, akwa ahụ n'onwe ya dị oke ọnụ ma nwee ogo dị elu, nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịkpụ n'oge ọkọchị.
Otu n’ime nsogbu linen nwere bụ na ọ na-ataba ahịkọ. Ọ bụrụ na ị na-eyi uwe ejiji nke eji akwa ọcha, ọbụlagodi na a na-ede ya n'ụtụtụ, ọ ga-ata ahụhụ mgbe ị na-aga nzukọ ụlọ ọrụ na etiti ehihie.
Nwere ike ịtụle owu na hemp gwakọtara ákwà, attentionaa ntị na ọdịnaya nke hemp dị ala karịa owu, dị ka 60 owu +30 hemp. Ihe a nwere nnukwu ihe ọ pleụ ,ụ, yabụ na ọ naghị adị ka nke nzuzu, kama ọ na-agbakwunye ederede. You nwere ike tinye ya n'ime ụlọ mposi gị mgbe ị sachapụchara, n'adịghị ka akwa ọcha dị ọcha, nke chọrọ nchara.
2.Real silk akwa
Uwe nke silk dị ọcha bụ akụkọ pụrụ iche pụrụ iche mara mma, agbanyeghị ntachi obi nke silk dị ọcha anaghị eto, n'ihi na ha nwere odo, see nsogbu silk iji mepụta, chọrọ ịzụrụ ịlaghachi iyi okwu ochie n'oge ndị nkịtị ga-ewere pụrụ iche lekọta anya n'ichebe ihe ọcha. Ọ naghị adị mfe idobe, mana n'ihi na ọ na-amị amị ma dị jụụ n'oge ọkọchị, ọtụtụ ụmụ nwanyị na-azụta ya.
Mara ya Njirimara, ị dịkwa mkpa ka ntị a nsogbu, bụ silk na linen dị ka mfe ahunsenwu! Na udi nke dị ọcha silk bụkwa pụrụ iche nke ukwuu, nwere silk, Japanese silk, French silk nile, n'etiti ha abụọ silk bụ dịtụ mfe ime.
Dị ka ibu crepe DE Chine, ọ bụ ihe a na-ahụkarị na silk, elu ahụ na-ahụ ihe doro anya, ejiri mee akwa, ma ọ naghị adị mfe ịpịpịa ya, ọ dị mfe ịzụta na ahịa.
Enwekwara ụdị satin na-agbatị, n'ihi na gbakwunye ihe na-erughị 10 spandex, yabụ bụrụ silk na-agbanwe agbanwe, nke a na-ejikarị eme uwe elu, mgbochi mgbochi ndozi a na-apụghị imeri emeri dịkwa mma karị idebe, echegbula onwe gị banyere anwụ ngwa ngwa
Uwe akwa owu nwere mmetụta nke ịmịkọrọ ọsụsọ, kamakwa ọ nwere ike igbochi ọsụsọ na-esi ísì ụtọ, yie ahụ agaghị ọsụsọ na akpụkpọ ahụ ga-eto rashes na-acha uhie uhie. Sụchaa igwe ịsa ahụ a otutu, saa akwa uwe mwụda akọrọ, etinyela uche na etu esi eme ya.
Post oge: Jul-18-2020
13lọ 13A03, Guoda Chain Business Building, NO173 Shuiyuan Street, District Xinhua, Shijiazhuang, Hebie, China